“Cid dhulkeenna kusoo xadgudbi kartaa ma jirto!” – Kenyatta oo Somalia ku dhega hadlay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Cid dhulkeenna kusoo xadgudbi kartaa ma jirto!” – Kenyatta oo Somalia ku...
“Cid dhulkeenna kusoo xadgudbi kartaa ma jirto!” – Kenyatta oo Somalia ku dhega hadlay
(Lamu) 22 Luulyo 2021 – MW Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaysan marna aqbali doonin in aanu dalkiisu marna aqbalaynin in xuduudihiisa qayb ka tirsan uu soo daakhulo dal kale.
Ahuru ayaa waxa uu digniin u jeediyay xoogag uusan carrab dhabin oo uu laakiin tilmaamay in aysan xushmeynaynin madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa Kenya, taasoo loo qaatay Somalia.
Kenyatta ayaa hadalkan oo uu jeediyay shalay mar uu booqanayay Keynta Boni ee ku taaalla deegaanka Lamu una dhaw xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyey in dalkiisa aanu marnaba aqbali doonin cid kasta oo sheegata qayb ka mid ah dhulkiisa.
Warkan ayaa kusoo beegmaya jeer ay labada dal ka shaqaynayaan wanaajinta xiriirkooda oo aad u xumaaday sanadihii tegey.
Previous article“Khaarajinta Ikraan waxaa maleegey 2 nin waxaana fuliyey….” – Siyaasi kashifaad cusub sameeyey + Magacyada
Next articleUK oo uu lasoo xumaaday heshiis ka tirsan Brexit oo ay EU la gashay (Muran taagan & waxa la isku hayo?)